Nge "jacket" ngesiNgisi ihumusha ngokuthi "French". Namuhla, manicure French iyathandwa kakhulu futhi ngokuvamile isetshenziswa hhayi kuphela ukunakekelwa abavamile ngezinyathelo zenhlanzeko okwakufanele izinzipho, kodwa futhi umthamo wabo. inkonzo jacket Traditional kubhekwe ithiphu encane emhlophe ye uzipho ngasesinqeni umbala esiqinile noma pink, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, kwaba khona eningi zokuguqulwa: French-yeminyaka nge sequins ngesikhathi amathiphu; umbala; fan; ngokwezifiso, enziwe.
manicure French eside kusukela abe zakudala, ezingaphelelwa isikhathi. Ingabe ukushintsha izikhathi yemfashini, nezinzipho French ngeke ulahlekelwe ngokuhlathulula ukusebenza kwawo. Lokhu akusona isimanga, ngoba manicure igxile ubuhle bemvelo izandla ladies ', egcizelela izikhulu nangobuciko ifomu yabo. Ngaphezu kwalokho, iyashintsha iyaphupha ibe, shades avulekile we jacket zakudala ivumelana ngokuphelele nanoma iyiphi isitayela sokugqoka, ngabe kungcono ibhizinisi, intsha, isithombe yothando noma sporty. manicure French uhlale ziphoqa, futhi lokhu kwenza ukuba wochwepheshe nabaqambi phansi yayo ukudala inombolo nje ongenangqondo ongakhetha nezinhlobonhlobo ukucutshungulwa nokudweba marigolds.
izinzipho Immaculate jacket kuvame ilungiselelwe ngezindlela eziningana: okokuqala, ngumuntu Ukwakha-up of ijeli izinzipho, sibonga ngalo yimuphi owesifazane ungathola i manicure nenhle futhi ekhangayo kungakhathaliseki ukuthi Sasinjani isimo yokuqala izinzipho zakhe siqu; kwesibili, ubuchwepheshe eziphambili uvumele ukwakha izinzipho French ngokusebenzisa izinhlayiya umbala gel amathiphu wabo omkhulu. Ukuze ukhethe kahle jacket, okuyilona elidingekayo ukuze wena, kufanele okungenani cishe amele ezivamile emhlabeni zayo ezihlukahlukene.
Ngakho, ethandwa kakhulu izinzipho French - Classic. Kwaba ngaphansi zezinkozi nezinzipho zakhe okwandisa ngokukhethekile, futhi kukhona cishe intombazane noma owesifazane owenza nakancane ukuthi kubukeka sengathi lokhu manicure. Basecoat ayilutho pink noma beige (okuqinile) umbala, futhi njalo ezimhlophe "uyamamatheka" phezu amathiphu - lena ukusebenza zakudala manicure French.
Ukunikeza buhle Frenchy nokukhanya ungenzi amathiphu sezipikili ezimhlophe, ukupenda okungcono kukho konke aluhlaza, shades yabo multi anemibala. izinzipho Ukwandisa French, linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso ubude bawo nombala, vula amehlo akho engqondo futhi ujabulele manicure okungavamile. Zama fan isitayela otdekoriruyte rhinestones Inibhu, amaphethini, imihlobiso. Abanye baze ukuphatha ukwenza emgodini nail vdet ukuba indandatho amancane noma funny emiphemeni.
Ukuze kwandiswe jacket "Millenium", usebenzisa amathiphu ekhethekile, lapho onqenqemeni mahhala uzipho embozwe sequins opaque, emihle, aminyene futhi sikhulu enhlobonhlobo futhi elikhazimulayo. Lokhu manicure kungenziwa labizwa ngokuthi emikhosini futhi zemikhosi, kuba ngokuphelele ezifanele ukubheka ephathini intsha noma yimuphi omunye zokwazi ndawonye, lapho ulwandle kwezibani neon kukhanye ukwenza licwebezele hhayi kuphela, kodwa uqobo. Kulokhu, amandla liyadingeka.
Kuthandwa uthola lolu hlobo manicure French njengoba namabala ingilazi jacket. It is zenziwe emafomini, njengokuthi uma sisetshenziswa ngqo nail, futhi hhayi substrate, nomphumela ofiselekayo ngeke. The eside yilona onqenqemeni khulula, ngcono. Lokho manicure onjalo afana ngazo? Ukuze senze lokho, usebenzisa si ezivamile esobala noma sibe namabala ukwakha, okuyinto angenele abavamile upende ibala ngoba ingilazi (organic based). Zonke izinhlobo umbala izandiso ezithakazelisayo sikuvumela ukudala okungavamile ubuhle manicure. Wizadi uzothola at the amathiphu izinzipho namabala ingilazi nomphumela.
Gel Manicure sula okusha: imibono, izithombe
Ukudweba ku izipikili - ngokushesha futhi kalula
Indlela ukudweba eqhwa wekugcina ku izipikili
Kanjani ukwenza pedicure e-salon? pedicure lochwepheshe
Noble itshe Garnet. izakhiwo yezimbiwa
Imvelo izilwane carbohydrate. Reserve carbohydrate iseli isilwane glycogen noma isitashi? Njengoba reserve carbohydrate ngokuthi amaseli isilwane?
Amakhandlela Bheka "Dikloberl": yokusetshenziswa
Morning Glory irubi izibani
Kuyini cholecystitis calculary?